I-imeyili Yevidiyo: Isikhathi Sokuthengisa Ukuze Uzitholele Okwakho | Martech Zone
I-imeyili Yevidiyo: Isikhathi Sokuthengisa Ukuze Uzitholele Okomuntu Siqu
NgoMsombuluko, Mashi 23, 2020 Lwesine, Disemba 30, 2021 Douglas Karr
Ngenkinga ye-COVID-19, ikhono lamaqembu angaphandle okuthengisa ukugcina ukuxhumana komuntu namathemba abo namakhasimende lisuswe ngobusuku obubodwa. Ngiyakholelwa ngokuqinile ukuthi ukuxhawulana yinto ebaluleke kakhulu kunqubo yokuthengisa, ikakhulukazi ngokuzibandakanya okukhulu. Abantu kumele bakwazi ukubukelana emehlweni futhi bafunde nolimi lomzimba ukuze bathole ukuzethemba otshalweni abalwenzayo kanye nozakwethu abamkhethayo.
Ukwenza izinto zibe nzima, ikusasa lomnotho wethu liyinkinga. Ngenxa yalokho, amaqembu okuthengisa alwela ukuvala amadili… noma athole izinkampani ukuthi ziphendule. Ngisebenzela ukuqala manje ngamakhulu ezinkulungwane zamaRandi abesezingeni eliphakeme… futhi isivumelwano sethu sokuqala sibuyisele emuva usuku. Njengoba sazi ukuthi sisiza izinkampani nge-automation nokuhlanganiswa, yisikhathi esinzima kusukela lapho siyazi ukuthi singabasiza.
Ividiyo Yezinkundla Zokuthengisa
Lokho kusho, sisebenzisa izixazululo ze-imeyili zevidiyo ukusiza amaqembu ethu okuthengisa ngokwenza ngcono ukuzibandakanya kwawo namathemba namakhasimende ngokufanayo. Ividiyo ayiqhathanisi nobuso bomuntu, kepha inikeza ithuba eliheha kakhulu lokukhuluma mathupha nethemba noma ikhasimende.
Ividiyo yamapulatifomu okuthengisa inezici ezithile ezivamile:
Qopha - Qopha amavidiyo enziwe ngezifiso nge-desktop, i-plugin yesiphequluli, noma uhlelo lokusebenza lweselula.
Ukuhlanganiswa kweCRM - Qopha i-imeyili ekuholeni, oxhumana naye, i-akhawunti, ithuba, noma icala.
Enhancement - hlela amavidiyo bese ufaka ukugqobhoza nokuhlunga.
Izaziso - qapha ukuzibandakanya kwevidiyo yesikhathi sangempela futhi uthole izexwayiso.
amakhasi - ukuhlanganiswa kwekhasi lokufika ukubuka nokuphendula kuvidiyo. Abanye baze babe nokuhlanganiswa kwekhalenda lokuhlela ama-aphoyintimenti.
Umbiko - Kala ukusebenza ngemibiko yangokwezifiso nama-Dashboard.
Nawa amapulatifomu athandwa kakhulu:
I-BombBomb - Ngokushesha futhi kalula urekhode, uthumele futhi ulandelele ama-imeyili wevidiyo ukugqama ebhokisini lakho lokungenayo labathengi ', amakhasimende' nabasebenzi.
I-Covideo - Qopha futhi uthumele amavidiyo enziwe ngezifiso athuthukisa amazinga okuphendula, andise amathuba okuthengisa futhi avale amadili amaningi
I-Dubb - Khulisa ibhizinisi lakho ngamakhasi evidiyo angathunyelwa angathunyelwa noma kuphi ngokubukwa kuqala kwe-GIF.
Lula - Ukuthumela i-Loom kusebenza kahle kunokuthayipha ama-imeyili amade noma ukuchitha usuku lwakho emihlanganweni unezingxoxo ezingadingi ukuthi zenzeke ngesikhathi sangempela.
I-OneMob - Dala ngokushesha amakhasi wokuqukethwe ukuze Bahlanganyele amathemba, amakhasimende, ophathina nabasebenzi
i-vidREACH - i-vidREACH iyi-imeyili yamavidiyo eyenziwe yaba ngeyakho kanye nesikhulumi sokuzibandakanya kwezentengiso esisiza amabhizinisi ukuthi ahlanganyele izethameli zawo, alethe ukuhola okuningi futhi avale amadili amaningi.
Ividiyo Yezindlela Zokuthengisa
Ibhokisi lokungenayo lawo wonke umuntu linqwabelene phezulu njengamanje futhi abantu banesikhathi esinzima sokuhlunga okokusebenza okunganikeza inani lomsebenzi wabo. Nayi iseluleko sami sokusebenzisa ividiyo yokuthengisa:
Umugqa Wesihloko - Beka ividiyo kulayini wakho wesihloko ngenani olilethayo.
Fingqa kafushane - Musa ukuchitha isikhathi sabantu. Zijwayeze lokho ozokusho bese ufika ngqo ephuzwini.
Nikeza Usizo - Nikeza ithuba lokuthi okulindele noma iklayenti lakho lilandelele.
Isisetshenziswa - Sebenzisa ikhamera enhle yewebhu nemakrofoni. Uma ungenayo imakrofoni enhle, ihedsethi izovame ukusebenza.
Ividiyo Yeselula - Uma uqopha ngeselula, zama ukuqopha kwimodi yokwakheka komhlaba ngoba abantu bazokuvula lokhu ku-imeyili yabo, mhlawumbe kudeskithophu uma besehhovisi labo lasekhaya.
Gqoka Impumelelo - Izithukuthuku namabhulukwe e-yoga kungaba yizembatho ezihamba phambili zehhovisi lasekhaya, kepha ukuze kukhishwe ukuzethemba, sekuyisikhathi sokugeza, ukushefa nokugqoka ukuze uphumelele. Kuzokwenza uzizwe uzethemba ngokwengeziwe futhi umamukeli wakho naye azokuthokozela kakhulu.
Background - Ungami phambi kodonga olumhlophe. Ihhovisi elinemibala ethile yokujula nemfudumalo ngemuva kwakho lizomema kakhulu.
Ukudalula: Ngisebenzisa isixhumanisi kwamanye amathuluzi akulesi sihloko.
Tags: I-BombBombukuhlanganiswa kwe-crmonemobividiyo yokuthengisaividiyo yezinkundla zokuthengisaividiyo nge-imeyiliUkuhlanganiswa kwe-YouTube
Thola Ithonya Lakho: Dala Izingxoxo Zomhlaba Wonke Eziholwa Okuqukethwe Okuphefumulelwe